Nei Kuine Machechi Akawanda? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Norwegian Nzema Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nei Kuine Machechi Akawanda?
Vanhu vari kushandisa zvakadzidziswa naJesu Kristu kuti vatange machechi akasiyana-siyana. Asi Bhaibheri rinoratidza kuti kunongova nokunamata kumwe chete kwechokwadi. Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tidaro, asi ingonzwa 3 zvacho.
Jesu akataura kuti aidzidzisa “chokwadi,” uye vaKristu vepakutanga vaiti chitendero chavo ndicho “chokwadi.” (Johani 8:32; 2 Petro 2:2; 2 Johani 4; 3 Johani 3) Izvi zvinoratidza kuti vanhu vanotsigira dzidziso dzisingapindirani nezvakadzidziswa naJesu vanenge vasiri vaKristu vechokwadi.
Bhaibheri rinodzidzisa kuti vaKristu ‘vose vanofanira kutaura vachibvumirana.’ (1 VaKorinde 1:10) Asi machechi akawanda haabvumirani pazvinhu zvidiki zvakadai sokuti chii chinonzi muKristu. Saka hazvingaiti kuti titi machechi ose ndeechokwadi.​—1 Petro 2:21.
Jesu akataura kuti vanhu vakawanda vaizozviti vaKristu asi vachikundikana kuteerera mitemo yake saka aizovaramba. (Mateu 7:21-23; Ruka 6:46) Vamwe vaizotsauswa nevatungamiriri vezvitendero vanokanganisa kunamata kwechokwadi nechinangwa chokuti zvinhu zvivanakire ivo. (Mateu 7:15) Asi vamwe vanhu vanoenda kuchechi dzavanoziva kuti hadzisi dzechokwadi nokuti vanenge vachingoda kunzwa zvinhu zvinofadza nzeve dzavo panzvimbo pokunzwa chokwadi chiri muBhaibheri.​—2 Timoti 4:3, 4.
Jesu akashandisa mufananidzo wegorosi nemasora kuti aratidze kuti paizova nevanhu vakawanda vaizotsauka pachiKristu chechokwadi. (Mateu 13:24-30, 36-43) Zvakatora nguva yakareba kuti musiyano waiva pakati pevaKristu vechokwadi nevenhema unyatsooneka. Saka pakafa vaapostora, vanhu vakawanda vakatsauka pakutenda sezvakanga zvataurwa naJesu. (Mabasa 20:29, 30) Kunyange zvazvo vanhu vakatsauka pakutenda vachidzidzisa zvakasiyana-siyana, vose “vakatsauka pachokwadi.”​—2 Timoti 2:18.
Jesu akagara ataurawo kuti musiyano wevaKristu vechokwadi nevenhema waizonyatsooneka. Tiri kuuona munguva ino yatiri kurarama, ‘yekuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva ino.’​—Mateu 13:30, 39.